July | 2014 | Wakhet Diary
जमनाको कुराः हरेलो मेला र भबिष्य, आयोजकहरुले ल्याउनु पर्ने भाबी रणनिति
Posted on July 30, 2014 by Wakhet Diary
(आजको बल्ग हाम्रो गाउँ को परम्परागत हरेलो मेला को वरिपरि नै छ। )
हरेलो मेला मात्रै होईन सबै गाउँले मेलाहरुको भबिष्य त्यति चम्किलो छैन। हामी हरु गाउँले मेलालाई किनेको मैनबत्ती जसरी बाली रहेका छौ। मैन बती बलेर सकियो भने फेरी अर्को नकिनि उज्यालो हुदैन। सबै गाउँ का मेलाहरु यसरी नै मैनबत्तिको हालतमा छन।
किन हराउदै छ मेला को आकर्षण
मिडिया को पहुचले गर्दा अब परम्परागत रौनकता मा कम आयो। मनोरन्जनका लागी नजिक मा सिनेमाहरु हरु उपलब्ध छन । घर घर मा केबुल टिभि जोडिएका छन। घर भित्र कयौ देश परका का च्यानलहरु छिरि सकेका छन। यस्तो अबस्थामा परम्परागत धर्राका मनोरन्जनहरु फिका लागि रहेका छन। मेला को आकर्षण हराउनु मा कला र सँस्कृतिमा सृजनात्मकता नहुनु पनि एउटा कारण बनेको छ। जस्तै दम्फु र मादल को युगमा मानिस मिडिया र प्रबिधि भन्दा पर थिए उनिहरुलाई मादल र हारमुनियम बजाएर मौखिक गाएर प्रस्तुत गरिएको साँस्कृतिक कार्यक्रम रोचक लाग्दथे। मैनटोल को उज्यालो मा मञ्चको पर्दा कति बेला खोलिन्छ भनेर मानिस ब्यग्रले प्रतिक्षा गर्दथे। अचेल को साँस्कृतिक कार्यक्रम का मञ्चहरुमा पर्दा नै हुदैनन। सबै कुरा खुल्ला भएको ले कौतुहलता भन्ने कुरा मन मा नै आउदैन। कुनै बेला कतिजना को प्रस्तुति होला। कसरी नाच्लान भन्ने अनुमान गर्दा गर्दै उत्साह मनमा चढि सकेको हुन्थ्यो।
मेला रोचक नहुनु मा बिभिन्न कारणहरु छन।
-खेलकुदहरु प्रतिस्पर्धात्मक नहुनु। कुनै बलियो टिम आउदैछ भन्यो भने जित्ने उनि ले नै हो किन गेम फि सक्ने भन्ने हारको मानसिकता बढ्नु। खेल बलियो टिम सँग खेलेर जित्ने हो भन्ने आत्मबल खेलाडीले गुमाउदै जानु। खेलाडी समायमा उपस्थित नहुनु।
-साँस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा सृजनात्मकता हराउनु। जति नृत्यहरु प्रस्तुत गरिन्छ त्यो सबै सबैले टिभिमा ५० सौ पटक देखिसकेको नृत्य हुन्छ।
-बुढा पाका पुस्ताको लागी कार्यक्रम नै नहुनु। पुस्तान्तर यसरी फराकिलो भयो कि पुरानो पुस्ताले अहिलेका गीतहरु आधा बुझ्दैनन र आधा मन पराउदैनन। उनिहरुको लागी कार्यक्रम हरु बनाउन नसक्नु
– समुह समुह बिच हुने झगडाले निम्ताएको समाजको फुट। कुनै समायमा छिमेकी गाउँ हरुले मेलालाई राम्रो शोभा बढाई दिन्थे। अचेल समुह बिच मा हुने झगडा र मुद्दा ले गर्दा छिमेकी छिमेकी बिचको सम्बन्ध सुमधुर छैन। कुनै बेला गाउँले मेला मा अरु गाँउका सबै मानिस पहुना बनेर घर घर मा आईपुग्थे। अर्को गाउँ मा मेला लाग्दा त्यसरी नै जान्थे।
-आलो पालो घर घर मा खाना खुवाउने चलन हराउनु। तरुनी तन्नेरी बिच हासखेलको चलन छुट्नु। पुरानो समायका मेलाहरु कम खर्चालु यसैले हुन्थे कि खाजा देखी खाना बस्न सम्म सबै आलो पालो चलन ले हुन्थे। उमेर समुह का आफन्तको गाउँ का केटा केटीलाई मेला अबधि भर खाने बस्नेको ब्यबस्था उस्तै उमेरका केटाकेटीले गर्दथे। एक किसिमले आत्मियता थियो उनिहरु कतै न कतै बाट नातेदार परिहाल्थे। उस्तै पालो उनिहरुको गाउँ को मेला मा जाँदा पनि हुन्थ्यो। रमाईलो सँगै आत्मियता बढाएका हुन्थे यस्ता चलनहरुले।
-महँगाई बढ्यो, महँगाई यति बढ्यो कि साथीहरु सँगै होेटल मा बसेर खाजा खानलाई पनि मानिसलाई सोच्नु पर्ने अबस्था आयो। सबै कुरा किनेका र बजारे खाना पिन शैलीले पम्परागत कुराहरु हराएर गए।
-रातको समायमा हुनु भन्दा पहिल्यै मानिस आफ्नो गन्तब्य मा फर्कि सक्नु। अचेल का झगडाहरु पुलिस केस हुने र कुटपिट टाँका लाग्ने गरि हुने गर्दछ। त्यसैले समाय मै घर फर्किनु नै सबैले बुद्वमान सम्झन्छन। त्यसैले पनि मेला खाली स्थान नै खाली भए पछि रमाईलो कम हुने नै भयो।
-प्रबिधिले भित्राएको स्वतन्त्रताः पहिले एउटा साँस्कृतिक कार्यक्रमको लागी टिम को जरुरत पर्दथ्यो।बाध्यबादन बजाउने, गित गाउँने, नृत्य गर्ने जस्ता मानिसहरुको सकृयता बढि हुन्थे। प्रबिधिले अहिले मुवाईल मा गीत बजाएर नाँचिन्छ र तालिम गरिन्छ। तालिम देखि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सम्म राम्रो टिमओर्कको जरुरी हुने हुनाले त्यो बेला का समुह मा एकता थियो। अहिले यस्तो आवश्यकता छैन। मुवाईल मा गीत बजाएर मुवाईल मै भिडियो हेरेर नाँच्न सिकिएका र नाचिएका कार्यक्रम को मनोञ्जन र सृजनात्मकता प्रश्न पत्र आउट भै सकेको परिक्षा र रिजल्ट जस्तै फिका भयो।
आत्मनिर्भर हुन सकेन मेला ?
मेला आत्मनिर्भर हुन नसक्नु को कारण आम्दानी भन्दा बढि ब्यबस्थापन खर्च नै हो। जम्बो ब्यबस्थापन समिति। सामान्य खाजा खाए मात्रै पनि ४०-५० हजार को खर्चै भै हाल्छ।मेला अबधि अनाबश्यक लामो हुनु।
मेला आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको कारण
-खेलाडीहरु कम टिम सहभागिता
-मेला अबधि लामो हुने हुदा ब्यबस्थापन खर्च बढ्नु
-मेला बाट उठ्ने करहरुको अप्रादर्शिता
-बिदेश बाट सहयोग मागेर मेला चलाउने ट्रेण्ड। बिदेश बाट भएका स्पोन्सरहरुले मेलाई लाई अनाआवश्यक लामो र खर्चालु बनाएका छन।
-राष्ट्रिय स्तरका कलकारहरु पाश्रमिक दिएर ल्याउनु तर टिकट चलन नहुनु
-अर्को साल फेरी स्पोन्सर पाई हालिन्छ भनेर संकलन भए जति रकम खर्चमा देखाउनु र बचत नगर्नु।
-मेलाा आयोजक समितिले सर्वपक्षलाई समेटन नसक्नु
-युवा कल्व या मेला ब्यबस्थापन समिति सँग दिर्धकालिन योजना नहुनु। स्पोन्सरले स्पोन्सर गरे बापत उस्को ब्यबसायलाई बिक्री प्रबर्धन नहुनु। संस्थागत र ब्यबसायिक घराना भन्दा ब्यक्तिगत प्रायोजन बढि हुनु। प्रायोजकहरु सँग सम्पर्क गर्न सक्ने संयन्त्र कम्जोर हुनु।
यो बर्ष मात्रै हरेलो मेला नजिक आईरहदा बिदेशमा काम गरि सकेका एक जनालाई पनि मेला ब्यबस्थापन समितिमा र बैठकमा बोलाउनु पर्छ भन्ने तर्फ सोचाई नपुग्नु। अहिले , टक पुन, चकप्रसाद थापा, खेम ब.थापा, दिपक रोका, कुमार रोका, तुलप्रसाद रोका, खेम रोका, गौ ब. रोका रामकृष्ण पाईजा गाँउ मै छन। गत बर्षहरुमा १००% ग्राण्ड स्पोन्सर गर्ने बिभिन्न देशका मा छरिर काम गर्ने सहयोग दाताहरु हुनु हुन्छ उहाँ हरुलाई सम्मानार्थ सल्लाहकार को भुमिका मा छलफल गर्ने नसक्नु। भोलि गएर आज कै गाउँका युवाहरु भोलिको सहयोग दाता हो भन्ने अबधारणामा काम गर्न नसक्नु।
हरेलो मेला को निरन्तरताको लागी भाबि रणनिति
समाज को मुख्य शक्ती युवा पनि हो। हाम्रो युवाहरु कहिले बिदेश निस्कने मुडमा पासपोर्ट काटेर भिसाको पर्खाईमा बसिरहेको हुने हुनाले मेला आयोजना गर्नको लागि दिर्धकालिन योजना को अभाव छ। म गै हाल्छु भोलिका ले गर्छन भन्दा भन्दै हामी र हाम्रो समाज निकै पर पुगि सकेको छ।
परम्परागत मेलाहरु को निरन्तरता र बिकास को लागी रणनितिहरु आवश्यक छ।
-मेला हाम्रो खर्च होईन गौरव हो भन्ने भावनात्मक बिकास गर्नु आबश्यक छ।
-मेलालाई आयोजक खोज्ने र सन्चालन गर्ने भन्दा पनि आत्मनिर्भरको बाटो मा कसरी लैजाने भन्ने रणनितिहरुको बारे मा खोज र छलफल गर्नु आवश्यक छ।
-मेला हेर्न किन जाने ? भन्ने प्रश्न आउनु भन्दा पहिले फलानो मेला मा फलानो मौलिक कार्यक्रम हुन्छ त्यसैले हेर्नु पर्छ भन्ने प्रचारात्मक कार्यक्रम र ईमेज मेलाले बनाउनु पर्यो।
-स्थानिय उत्पादन र प्रबर्धवन संग मेला जोडिनु पर्यो। उत्पादन सँगै मेलालाई बजारिकरण र बिज्ञापन को रुपमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ।
-फलानो ठाउँ मा यस्तो गरियो हामी पनि यस्तै गर्ने भन्ने तिर नलागौ। हामी हाम्रो आफ्नै मौलिक ईमेज स्थापना मा लागौ।
-सबै भन्दा ठुलो कुरा टिमओेर्क हो। फलानो छ आयोजक मा उसैले गर्नु पर्छ भन्ने साँगुरो मानसिकता बाट सबै निस्कनु आवश्यक छ।
-कस्तो किसिम को कार्यक्रम बनाउने। कति टिम खेलाडी हुन्छ। खर्च कति हुन्छ र कसरी ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने योजना हरेलो आउने बेला मा मात्रै कुरा उठ्नु भएन। संस्कृति र परम्परा भन्ने कुराहरु १ दिन बचाएर हुदैन। यस्को लागी सबैले सकारत्मक रुपमा बिभिन्न समाय मा बिभिन्न चरणका कोशिस हरु गरिरहनु आवश्यक छ।
-परम्परा भनेको मेला र रमाईलो मात्रै होईन। हाम्रो मौलिक संस्कृति र एकताको कडि पनि हो। बिभिन्न उमेर, लिङग र सामुदायले यो मेरो हो भन्ने अनुभुति गर्ने सक्ने र कार्यएकता गर्ने सक्ने भनेको यस्ते मेला पर्वहरु नै हुन। जस्ले हामीहरुलाई भावनात्मकरुपमा जोड्छ।
-युवा कल्व गठन गर्दा हिजो हामीहरु भित्रकै ब्यबस्थापन समितिमा काम गरिसकेका हरुलाई बिदेश सल्लहाकार या प्रतिनिधिहरु राख्नु भयो भने कुनै पनि बिषयमा छलफल गर्न को सँग भन्ने कसरी जाने भन्ने सजिलो हुन्छ।
-बिगत मा प्रायोजन गरिसकेहा सँस्था,, दाताहाहरुलाई धन्यबाद र अपडेटहरु उपलब्ध गराउनु पर्दछ। धेरै मा मैले यहि निराशा देख्छु। हामीले गाउँ को लागी यति गर्यो उति गर्यो उनिहरुले अपडेट पनि गर्दैनन भन्ने गुनासो बिदेशको हुन्छ।
-आत्मनिर्भर मिडिया बनाउनु आवश्यक छ। जस्ले हाम्रो अपडेटहरु सजिलै सहि समयामा सबैलाई पुराउन सकोस र यो हाम्रो र राम्रो समाज भन्ने गर्व गर्न सकोस।
(जमनाको कुराः हरेलो मेला र भबिष्य, आयोजकहरुले ल्याउनु पर्ने भाबी रणनिति
हरेलो मेला २०७१ः वाखेत ब्यबस्थापन समिति बन्यो।
Posted on July 24, 2014 by Wakhet Diary
(Note- आज July- 24, 2014, साउन ८ गते २०७१)
हरेलो मेलाको दिन ‍‍- August- 19 2014 , भदौ ३ गते मँगलबार)
हरेलो आउन मात्रै २६ दिन बाँकी
परम्परा गत रुपमा मनाउदै आएको हरेलो मेला यस बर्ष पनि विविध कार्यक्रमका साथ् मनाउने निर्णय गर्दै निम्न लिखित मेला आयोजक समिती निम्न अनुसार चयन भएका छन। ,
मेला संयोजक )
( खेल्कुद संयोजक )
( सचिव )
( कोष संयोजक )
( प्रचार प्रसार संयोजक)
( स्वयम सेवक संयोजक )
निल बहादुर पाईजा
यू बहादुर पुन
याम बहादुर पुन
(विशेष सहयोगी सस्थाहरु )
भुमे थान आमा समुह ६,७,८,९
वि, नि, मा, वि
बराह समुदायक बन
स्रोतः गुन पुर्जा को अपडेट
रोजी रोका ज्युले Graduation गर्नु भयो @ Bradford University UK मा उहाँलाई बढाई छ
Posted on July 16, 2014 by Wakhet Diary
पात्लेखेत गाबिस वडानं ६ वाखेत स्थायी घर भै बेनी, कालीपुल म्याग्दी मा बसोबास गर्नु हुने दिल ब./पदमा रोका को छोरी रोजी रोका ज्युले Graduation गर्नु भयो @ Bradford University UK वाट उहाँ र उहाँ को सम्पुर्ण आफन्तलाई बढाई छ। वाखेत डायरी मा हाम्रो प्रतिभालाई सँग्रह गर्न पाउदा खुसी लागेको छ। अगाडीका पाईलाहरु सधै सफलता तर्फ लम्किरहुन यहि हाम्रो शुभकामना
स्रोतः ओम रोका युके।
पात्लेखेत – ६ वाखेत का शेर ब. पुन पुरस्कृत
Posted on July 9, 2014 by Wakhet Diary
बिगत ३ बर्ष देखि ब्यबसायिक बाख्रापालन मा लागेका शेर ब. पुनजी लाई पुरस्कार प्राप्त भएको खबर म्याग्दी अनलाईन छापिएको छ।
खबर तल हेर्नुहोला
पशुजन्य व्यवसाय प्रर्वद्धनका लागि सात लाख मूल्यका सामाग्री सहयोग
Written By : म्याग्दी अनलाइन on July 8, 2014
म्याग्दी, २४ असार । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय म्याग्दीले पशुजन्य व्यवसायको प्रर्वद्धनका लागि मंगलबार सात लाख रुपैया मूल्य बराबरका उपकरण सहयोग गरेको छ । चार वटा डेरी पसल र तीन वटा मासु पसल सञ्चालकलाई मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि उपकरणहरु हस्तान्तरण गरिएको हो । एक थान चिलीङ भ्याट भेसीन, ३ वटा फ्रिज, ७ वटा डिफ्रीज, तीन वटा टेबुल, तीन वटा डिजीटल तौलने मेसीन र तीन वटा मासु काट्ने चक्कु उपलब्ध गराइएको छ । मासु र दूध व्यवसायमा गुणस्तरीयता वृद्धी गराउन सात लाख रुपैया मूल्य बराबरको उपकरण सत प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख बरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर दयाराम चापागाईले जानकारी दिनुभयो ।
सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले उपलब्ध गराइएका उपकरणहरुले व्यवसाय प्रर्वद्धनका साथै उपभोक्ताहरुले स्वस्थ्य मासु तथा दूध उपभोग गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उक्त अवसरमा म्याग्दीको पशु पालन क्षेत्रमा प्रशसनिय काम गरेको भन्दै भगवतीका नन्दबहादुर भण्डारी, घारका नारायण बरुवाल, भकिम्लीका धनबहादुर श्रीस र पात्लेखेतका शेरबहादुर पुनलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । स्थानीय विकास अधिकारी बिष्णुप्रसाद शर्माको अध्यक्षता, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक डिल्लीराम रेग्मीको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यालयका पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक सुभाष रेग्मीले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
Posted in 1.वाखेत डायरी, साभार गरिएका समाग्री	| Leaveareply
थोपा थोपा पानी जोडेर सकियो बोक्से फाँटको रोपाई
Posted on July 5, 2014 by Wakhet Diary
म्याग्दी, पात्लेखेत गाबिस वाखेत का बासिन्दाहरुले बोक्से, शंकर पाईजा को खेत रोपाई गर्दै।
वाखेतेले सके बोक्से फाँट को रोपाई, रोपाई को लागी अझै प्रायप्त पानी छैन।
आकाशे पानी को भरमा हुने पहाडी रोपाई प्रयाप्त मात्रमा पानी नपरेको र मुल नफुटेको कारण ले असारको आधा महिना सकिदा पनि रोपाई हुन सकेको छैन। जेठ को अन्तिम हप्ता र असारको पहिलो हप्ता मा रोपेर सकिने बोक्से फाँटको रोपाई मुस्किल ले आज सकिएको छ।
टक पुन ले अपलोड गर्नु भएको अर्को फोटो यहाँ पनि पानी अभाव मा मुस्किलले रोपाई हुदैछ।
पात्लेखेत फाँट, रगरेगे फाँट, ओखले, ठुलो खला, देउती सारा, बनपाखे जस्ता फाँट हरु रोपाई को लागी पानी कुरेर बसेका छन।
रामकृष्ण पाईजा नेपाल गए
दुवई मा कार्यरत रेशम पाईजा को भाई पुर्ण ब. पाईजाको छोरा नेपाल गएका छन।
स्रोत – गणेश पाईजा दुबही
Posted in 1.वाखेत डायरी, बिदेश जादै - या नेपाल फर्कदै	| Leaveareply
वाखेतको द्वाखर्क, दैईडाँडा-तिम्मुरे पाखा बृक्षरोपण कार्यक्रम सम्पन्न
वाखेत का बराहपंग्रेनी सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह बडा नं ६,७,८,९ ले द्वाखर्क- दहिडाँडा, तिम्मुरे पाखा खण्डमा बृक्षरोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन।
वाखेत, द्वाखर्क- दहिडाँडा, तिम्मुरे पाखा खण्ड बृक्षरोपणः फोटो रिम प्र. रोका
पात्लेखेत गाबिस को वाखेत अब यस्तो ठाउँ हो जहाँ का सम्पुर्ण खाली ठाउँ सामुदायिक बन बनेको छ। सिद्वथान थान, दहगैह्रा खण्ड २०४० साल को आसपास मा बृक्षरोपण भएको हो। त्यस पछि क्रमश. प फड्के गैह्री, २०४६ साल मा २०४७ मा बराह पँग्रेनीमा, २०४८ मा धिउ दादा खण्ड र बाँकि बचेको तिम्मुरे पाखा, हेरालो बस्ने ढुँगा खण्ड बृक्षरोपण भएको हो। यो खण्ड बृक्षरोपण हुदा सम्म चौपाया हरु को लागी भनेर पानी को मुहान र खर्क जाने मुलबाटो हरु खुल्ला थिए। केहि बर्ष पहिले सबै मुलबाटो हरु बन्द गरि खुल्ला चौपाय चरणहरु समेत बृक्षरोपण गरिएको छ। अहिले का खण्डहरु तिनै खाली ठाउँ हरु हुन। वाखेतका सामुदायिक बन हरु अब पुर्णरुपमा चौपाय मुक्त र बृक्षरोपण ले भरिएको छ।
यस पटक सिर्मु, पामा, ओखर, सल्लो जातका बिरुवा हरु रोपिएको छ।
Posted in 1.वाखेत डायरी, पात्लेखेत गाबिसका कार्यक्रमहरु	| Leaveareply